आज विजयादशमी, टीका लगाउने साइत १०:३५ बजे | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २१ आश्विन २०७६, मंगलवार ०८:२२ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज विजयादशमी मनाइँदैछ । घटस्थापनाका दिन स्थापित घडाबाट अभिषेक गरी मान्यजनका हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर विजयादशमी मनाइन्छ ।
आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा थापेर मनाइँदैछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान ८:४५ बजे रहेको जनाएको छ। टीका प्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने बिहान १०:३५ बजे उत्तम रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
विजयादशमी आफैंमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन साइत खोज्नु नपर्ने पनि उनले बताए।मंगलबार चन्द्रमा मकर राशिमा रहेकाले टीका लगाइने मानिस पूर्व फर्कनुपर्छ। टीका लगाइदिनेले भने पश्चिम फर्केर बस्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ।
त्रेता युगमा आजैका दिन भगवान रामले असत्यको प्रतीक रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले त्यही समयदेखि विजयादशमी मनाउन शुरु गरिएको धार्मिक विश्वास छ।
आज गुरु पुरोहित, हजुरबा, हजुरआमा, बाआमा, मान्यजन तथा ठूलाबडाका हातबाट नवदुर्गाभवानीको टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी उनीहरुबाट यश, ऐश्वर्य वृद्धि, काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिइन्छ।
होशियार ! पत्रिकामा राखेर खाँदा क्यान्सर लाग्न सक्छ
काठमाडौं । कुनै पनि खानेकुरा पत्रपत्रिकामा राखेर दिनु र पत्रपत्रिकामा पोको पारेर राख्नु हाम्रो समाजमा सामान्य मानिन्छ । …
काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह हरेक साताजसो कुनै न कुनै कुराले चर्चामा आइरहन्छिन् । यस पटक उनी चलचित्र मारुनीका…
बजेटमा नयाँ योजनामाथि अंकुशः सांसदका योजनाहरु नै अलपत्र
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा यसअघि सञ्चालनमा रहेका तर पूरा हुन नसकेका आयोजनाहरुलाई प्रशस्त रहक…
राजधानीका रेष्टुराँमा लुकिछिपी यौनधन्दाः वेटर बनेर यसरी हुन्छ बार्गेनिङ !
काठमाडौं । व्यस्त शहर राजधानी । आ–आफ्नै उद्देश्य र लक्ष्य । विभिन्न सपना बोकेर आएका मानिसको जमघट हुने स्थान…
वायुसेवा निगममा १७६ जनाका लागि क्याप्टेनदेखि पेन्टरसम्म जागिर खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा विभिन्न तहमा १७६ जना कर्मचारी माग गरेको छ। लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा…
एजेन्सी। प्रेमलाई न उमेर ले छेक्छ न जात धर्मले रोक्छ । आज हामीले कुरा गर्न गइरहेको प्रेम सम्बन्ध पनि…
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद गम्भीर मोडमा,पार्टी विभाजन हुने संकेत ? 15 views
पूर्वमन्त्रि एकनाथ ढकाल द्वारा उप-राष्ट्रपति नन्द किशोर पुनसंग भेट7views
“हामी निजी क्षेत्र भनेको देशको समृद्धिको यात्राका दरिलो खम्बा पनि हौं “7views